MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA : Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim
Manana ny ambarany hatrany ireo mpanohitra manoloana ny zava-nitranga tamin’ny sabotsy iny na dia efa hita izao aza fa tsy nahomby. 25 février 2021
Niezinezina indray ny fanambaràna nataon’izy ireo izay nilaza fa manomboka izao dia hivadika ho tolona ny tatitra izay nokasain’ireo Solombavambahoaka Tim natao tamin’ny sabotsy.
Miharihary toy ny vay an-kandrina anefa ankehitriny fa leo korontana ary tsy mila korontana intsony ny vahoaka maro an’isa. Hita porofo mivaingana izany tamin’izay hetsika nokasain’ireo Mpanohitra ho natao, tamin’ny sabotsy lasa teo. Zara raha nisy tonga namaly ny antso ny olona, na hatramin’ireo mafana fo amin’ny fanoherana aza toa tsy tazana tetsy Analakely akory. Tsy nahomby, izay no azo amaritana ny fikasana hanakorontana nokasain’ireo Depiote Tim ho natao. Mody navily tany amin’ny fanaovana tatitra ny sain’ny olom-pirenena, kanefa rehefa nomena ny toerana malalaka teny Soamandrakizay dia tsy nanaiky sy tsy nigadona teny akory.
Izany hoe, tsy tany amin’ny tatitra velively no tian’izy ireo ho nahatongavana fa tany amin’ilay fanakorontanana mihitsy saingy iny nandamoka iny. Tsy manaiky lembenana hatrany anefa ny fianakaviamben’ny Mpanohitra. Ambaran’izy ireo ho didy jadona sy fanamparaham-pahefana ary fanitsakitsahana ny demokrasia ireny zava-niseho tamin’ny sabotsy ireny. Nanao fanambaràna iombonana ny RMDM, Vondrona Panorama, ny antoko Tim ary ireo Solombavambahoaka Mpanohitra. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa hiova ho “tolona” manomboka izao ny tatitra izay nokasaina hatao tamin’ny sabotsy teo ary tsy hijanona izany raha tsy tratra ny tanjona. Inona moa ilay tanjona fa tsy ny haka ny Fitondrana mialoha ny fotoana. Io no efa tetik’izy ireo tamin’io sabotsy io saingy rehefa tsy nahavaky hatramin’ny farany an’Analakely dia izao mampihorohoro ny Fitondram-panjakana izao indray. « Tanam-polo ny vahoaka, kanefa dia fitaovam-piadiana mahery vaika no arangaranga », hoy hatrany ilay fanambaràna.
Tsy nahazoana alalana ny hetsika nokasaina hatao teo Analakely. Teny amin’ny Kianjan’ny Soamandrakizay no nomena azy ireo kanefa tsy nifanaraka tamin’ny tetika nomaniny izany ka dia nolavin’izy ireo. Araka izany, rehefa hetsika mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka dia tsy maintsy andraisana fepetra henjana tahaka ireny. Nilaza ireto Mpanohitra fa manameloka ny herisetra izay nitranga tamin’ny sabotsy, izay mampametra-panontaniana hoe : herisetra inona ? Raha ny zava-nisy teny Analakely dia nilamina tsara, ireo olon-dry zareo nikasa hanakorontana aza no nosamborina avy hatrany mba tsy hisian’izay herisetra izay.
Tsy mahita lalan-kombana intsony ireto Mpanohitra manoloana ny tsy fahombiazan’ireo hetsika maro nokasain’izy ireo hatao teto amin’ny Firenena. Andrasana indray izay endriky ny tolona hoentin’izy ireo hatao ato ho ato izany.